Global Voices नेपालीमा » द्वन्द्वपीडित सोमालियामा एउटा हात्तीको लामो दूरीको यात्राले आशा जगाएको छ · Global Voices नेपालीमा » Print
द्वन्द्वपीडित सोमालियामा एउटा हात्तीको लामो दूरीको यात्राले आशा जगाएको छ
अनुवाद पोष्ट गरिएको 29 मार्च 2016 17:19 GMT 1	 · लेखक Faaris Adam अनुवादक Sanjib Chaudhary
श्रेणी : उप-सहारा अफ्रीका, सोमालिया, इतिहास, नागरिक मिडिया, युद्ध र द्वन्द्व, वातावरण
अफ्रिकी हात्ती। विकिपिडिया प्रयोगकर्ता मुहम्मद माहदी करिमद्वारा जिएनयू फ्री डकुमेन्टेशन लाइसेन्स अन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको तस्वीर।
मोर्गन नाम गरेको एउटा भाले हात्तीले एक्लै केन्यादेखि सोमालियासम्म २२० किलोमिटरको (१३७ माइल) दूरी तय गरी संरक्षणकर्मीहरूलाई चकित पारेको छ। यी जनावरहरू विगत २० वर्षमा गृह युद्धका कारण सोमालियामा विरलै देखिएका छन्।
३० वर्षको हाराहारीमा रहेको मोर्गनले तीन हप्तामा उत्तरतिरको उक्त दूरी पार गरेको थियो भने उसले भिरेको ट्र्याकिङ्ग कलरको मद्दतले संरक्षणकर्मीहरूले सो कुरा पत्ता लगाए। केही रिपोर्टहरूले १९८० ताका युद्ध शुरु भएयताको सोमालियामा पहिलोपल्ट हात्ती देखिएको पुष्ट खबरका रुपमा लिएका छन्। यद्यपि अल जजीराले सेप्टेम्बर २०१५मा सोमाली स्थानीय निकायहरूका  अनुसार सिंह, चितुवा, जिराफ, भैंसी र अष्ट्रिचका साथै हात्तीहरूले सो समयमा बोर्डर पार गरेको पुष्टि गर्योे।
“हामीले अफ्रीकामा गरेका सबै ट्र्याकिङ्गमध्ये यी गतिविधि तथा यी परिस्थिति असाधारण छन्,” सेभ द एलिफेन्ट्स संस्थाका इआइन डगलस ह्यामिल्टनले भने । “एउटा भाले हात्तीको लामू जिल्लाभरिको घूमफिर, ताना नदीदेखि सोमाली बोर्डरसम्म, कसैले पनि यस्तो देखेको छैन।”
मोर्गनले केन्याको ताना नदीको डेल्टा (तीनतिरबाट पानीले घेरिएको जमीन) मध्य फेब्रुअरीमा छाड्योे र यस महिनाको शुरुमा सोमालिया पुग्यो। उक्त हात्तीले फर्कनु अघि २४ घण्टाभन्दा कम समय सोमालियामा बितायो।
किन हात्तीहरूले २० वर्षअघि सोमालिया छाडे?
१९८० ताका शुरु भएको र हालसम्म चलिरहेको सोमाली गृह युद्धले  हजारौं मानिसलाई मात्र नभएर त्यहाँका जनावरहरू पनि विस्थापित गरेको छ। मानिसहरू केन्या, इथियोपिया र अन्यत्रका शरणार्थी शिविरतिर भागिरहँदा धेरै जंगली जनावर, विशेष गरी ठूला पाँच  (अफ्रिकी सिंह, अफ्रिकी हात्ती, केप बफेलो, अफ्रिकी चितुवा, र सेतो/कालो गैंडा) केन्याका शिकार आरक्षतर्फ लागे।
द्वन्द्वका अलावा, सोमालियामा हात्ती जस्ता जनावरहरू चोरी शिकारको फन्दामा परे। यसलाई लडाकूहरूले आयश्रोतका  रुपमा लिएका थिए।
१९९१ मा सोमाली केन्द्रीय सरकारको पतन अघि सोमालियाको दक्षिणी भेग ठूला पाँच जनावरहरूका लागि निकुञ्ज थियो। यो क्षेत्र बाँकी शुष्क र अर्द्ध–शुष्क सोमालियाको तुलनामा कृषि–योग्य छ। साथै यस क्षेत्रबाट सोमालियाका दुई ठूला नदीहरू जुबा र शाबेल बग्दछन्।
तर यही क्षेत्र सबभन्दा न्यायविहिन थियो। केन्यासमर्थित सोमाली सरकारी सेनाद्वारा हटाइनु अघि यो क्षेत्र लडाकू समूह अल शबाबको  नियन्त्रणमा थियो। मोर्गनको संक्षिप्त फर्काइ सम्भवतः त्यस क्षेत्रका स्थायित्व फर्कदै गरेको संकेत हो।
अपेक्षा गरिएझै धेरै मानिसले यस समाचारलाई हर्ष र उत्साहका साथ लिएका छन्। ट्वीटरमा वाइल्डलाइफ कन्जर्भेशन सोसाइटीले उल्लेख गर्योः
हात्तीको लामुदेखि सोमालियासम्मको अतुलनीय हिडाइले वासस्थान र करिडोरको महत्व दर्शाउछ।
‘मोर्गनको लागि तपाईले गर्नसक्ने सबभन्दा राम्रो कुरा चुप भइदिनु हो’
सेभ द एलिफेन्ट्सको फेसबूक पेजमा मोर्गनको कथा प्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै केही पाठकहरूले जनावरको सुरक्षाका लागि यो कथालाई किन गोप्य राखिएन भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे। उनीहरूले तर्क गरे अनुसार चोर शिकारीहरूले उक्त जानकारी मोर्गनलाई पत्ता लगाउन प्रयोग गर्न सक्थे। उक्त हात्ती फर्कनु अघि सोमालियाभित्र तीन किलोमिटर हिड्यो भन्ने तथ्यबाहेक मोर्गन अहिले रहेको स्थान रिपोर्ट गरिएको छैन।
आड्रिएन हेस्फोर्डले लेखिन्ः 
मोर्गनको अस्तित्व र ऊ कहाँ छ भन्ने बारे मौन बस्नु उसका लागि सबभन्दा उत्तम हुने थियो। अब मलाई उसको र उसको क्षेत्रका अरु कुनै हात्तीहरूको सुरक्षाको डर छ।
जुली गूडिसनले सुझाइन्ः 
मोर्गनको लागि तपाईले गर्नसक्ने सबभन्दा राम्रो कुरा कृपा गरेर ऊ रहेको स्थानबारे चुप भइदिनु हो र अवश्य पनि उसका दाँतलाई रंगाइदिनु हो।
क्रिष्टी ह्यास्किन्सले मोर्गनको सोमालियातर्फको लामो हिडाइसम्बन्धी गरिएको प्रचारको तर्कबारे प्रश्न गरिन्ः 
यो पोष्ट र प्रचार गलत हो किनकि यसले यो भव्य हात्तीलाई अनावश्यक जोखिममा पार्छ। म उसको बारे निकै चिन्तित छु।
आइयुसिएन रेड लिष्ट अफ थ्रेटेन्ड स्पीसिज (संकटापन्न प्रजातिको सूची) का अनुसार अफ्रिकी हात्तीहरू असुरक्षित प्रजाति मानिन्छन्। चोरी शिकार र वासस्थानको विनाश यिनीहरूका लागि दुई सबभन्दा ठूला खतरा हुन्।
यस कथामा विचार गर्दैै बार्बरा थम्सनले टिप्पणी गरिन्ः 
चमत्कार हुन्छ, अब हामीले यस हात्तीमा नजर राख्न जरुरी छ, र सोमालीहरूलाई संरक्षणतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ न कि हत्यातर्फ।
केन्या मोर्गनका लागि सर्वाेत्तम ठाउँ हो भनेर जुलियस मबुवीले सुझाएः 
त्यो हात्तीलाई सकेसम्म चाडै केन्यातर्फ फर्काउन जरुरी छ
निलमिनि लेकाम्गेले त्यस हात्तीका लागि रक्षक राख्नुपर्ने सुझाइन्ः 
के उनीहरूले उसका लागि रक्षक राख्न सक्छन्? ऊ आखिरमा ट्याग भइसकेको छ। एउटामात्र भए गाह्रो नहोला। म आशा गर्छु।
एक सोमाली फेसबूक प्रयोगकर्ता योंग आकले यस अवसरलाई प्रयोग गर्दै केन्यालाई  सोमाली हात्ती फिर्ता गर्न आग्रह गरेः
गृह युद्ध अन्त्य भएको छ, प्यारो घरतर्फ फर्कनलाई सुस्वागतम्। केन्याले बाँकी सोमाली हात्ती फिर्ता गर्नुपर्छ नत्र २०० वर्षसम्मको पर्यटकीय आम्दानीको १० प्रतिशत सोमालियासँग बाड्नुपर्छ।
URL to article: https://ne.globalvoices.org/2016/03/29/366/
 सेप्टेम्बर २०१५मा सोमाली स्थानीय निकायहरूका: http://www.aljazeera.com/news/2015/09/kenya-wildlife-flees-al-shabab-conflict-somalia-150916085912634.html
 सोमाली गृह युद्धले: https://en.wikipedia.org/wiki/Somali_Civil_War
 ठूला पाँच: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_five_game
 अल शबाबको: https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Shabaab_(militant_group)
 मोर्गनको कथा: https://www.facebook.com/savetheelephants.kenya/posts/10153443058478161
 प्रश्न गरिन्ः: https://www.facebook.com/savetheelephants.kenya/posts/10153443058478161?comment_id=10153443773328161&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
 टिप्पणी गरिन्ः: https://www.facebook.com/savetheelephants.kenya/posts/10153443058478161?comment_id=10153445443378161&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D